Kuvaliwe Loop Cooling Tower: Chemical Industry
Imboni Yamakhemikhali ibandakanya uchungechunge lwezinqubo eziyinkimbinkimbi njengokufudumeza, Ukupholisa, ukufingqa, ukuhwamuka nokwehlukana. Imboni yamakhemikhali ingenye yemikhakha emisha futhi ekhula ngokushesha kakhulu. Ayikwazi ukusebenza ngaphandle kombhoshongo Wokupholisa, futhi iyingxenye ebalulekile Yomkhakha Wezamakhemikhali, lapho Ukushisa kufanele kuhlakazelwe khona emoyeni noma ama-Fluids kufanele avinjelwe kahle ngokulahleka okuncane kwe-Energy & Water.
Izindleko zeRising Power and Water zishayela Imboni Yamakhemikhali ifuna ubuchwepheshe obusha obungenza ibhizinisi lizinze kakhulu futhi behlise nezindleko Zokukhiqiza.
Kulindeleke ukuthi intuthuko ezindaweni ezifana ne-biotechnology, amaseli kaphethiloli, ubuchwepheshe bezemvelo nezinto ezihlakaniphile kuzohola indlela yokuhlangabezana nezidingo zesikhathi esizayo emhlabeni jikelele.
Ubuchwepheshe obunokwethenjelwa bokushintshana ngokushisa budinga Imboni Yamakhemikhali, ngokusebenza okuzinzile kuletha i-SPL phambili. Isimo sethu esiqinile sobuchwepheshe bezobuciko sihlinzeka ngokusebenza kahle kakhuluKuvaliwe I-Loop Cooling Towers / Ama-Condensers Evaporative kanye nama-Coolers we-Hybrid.
Izixazululo nezinsiza ezenziwe ngezifiso ze-SPL ziletha izinzuzo ezinkulu ngokusebenza kahle kwamandla, ukuzinza, ukonga okuphephile namanzi, ngoba zivumela ukupholisa izinqubo zokukhiqiza ngemfucumfucu encane yezinsizakusebenza, ukuphathwa okulungile nokugcinwa kwezingxenye zombhoshongo opholisayo isikhathi eside futhi esimeme yesikhathi.